Ecuador na Galápagos Islands na-ekwupụta ọkwa ntinye ọhụrụ chọrọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Ekwedọọ » Ecuador na Galápagos Islands na-ekwupụta ọkwa ntinye ọhụrụ chọrọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Dị ka nke Disemba 01st, 2021, ule RT-PCR na-adịghị mma na kaadị ịgba ọgwụ mgbochi bụ iwu mgbe ị na-abanye n'ókèala Ecuadorian, enweghị ihe ndị ọzọ, dịka nkọwa ndị a si dị:
Ndị njem niile gafere afọ 16 na-abanye obodo ahụ ga-eweta kaadị ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19 ma ọ dịkarịa ala ụbọchị iri na anọ nke nkwado mgbe emechara atụmatụ ahụ yana nsonaazụ ọjọọ nke nnwale RT-PCR ozugbo emere ruo awa 14 tupu mgbe ahụ. mbata na Ecuador.
Ụmụaka nọ n'agbata afọ 2 na 16, ga-eweta nsonaazụ ule RTPCR na-adịghị mma nke emere ruo awa 72 tupu mbata. Ecuador.
Mmachibido ịbanye n'ókèala mba nye onye ọ bụla ebe ebe esitere ya, nkwụsị ya ma ọ bụ njem ya bụ South Africa, Namibia, Lesotho, Zimbabwe, Botswana na Eswatini, Mozambique na Egypt.
Ọ bụrụ na onye njem ahụ gosipụtara akara ngosi dakọtara na COVID-19, ọ / ya kwesịrị ịkọ ya site na ịkpọ 171 nke Ministry of Health Health maka nleba anya na njikwa.
Ndị njem niile na-abata Ecuador ga-akọrịrị na Ministry of Public Health na
ọnụnọ ma ọ bụ enweghị akara ngosi na-egosi COVID-19 n'onwe ha ma ọ bụ na kọntaktị ha kpọmkwem site na nzikọrịta ozi ọ bụla.
Onye njem ọ bụla na-abanye Ecuador nke gosipụtara mgbaàmà ndị metụtara COVID-19, (mmụba ọkụ, ụkwara, ahụ efekarị, isi ísì, enweghị ụtọ, na ndị ọzọ), n'agbanyeghị nsonaazụ RT-PCR, ga-enyocha ya. ndị ọrụ nke Ministry of Public Health.
Ọ bụrụ na e kpebisiri ike na ọ bụ "ikpe a na-enyo enyo", a ga-eme nyocha ngwa ngwa antigen (nasopharyngeal swab) ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ bụrụ na ọ dị mma, a ga-eme ụbọchị iri (10) iche iche mgbe ụbọchị nlele ahụ gasịrị n'ụlọ ma ọ bụ n'ebe ọ bụla. ebe obibi nke onye njem na-ahọrọ na n'ego onye njem. Maka nsonye, ​​ọ ga-akọ kọntaktị kọntaktị. Ekwesịrị itinye ozi a na nkwupụta ahụike njem njem. Ọ bụrụ na nnwale antigen ngwa ngwa adịghị mma, onye njem ahụ ekwesịghị ime ikewapụ ya, kama ọ kwesịrị ịkọ akara ngosi na-egosi COVID-19.
Naanị ụdị ule enyere ikike ịbanye na mba ahụ bụ ule qualitative ezigbo oge RT?PCR, nke a ga-edobe n'agbanyeghị ogologo oge ịnọ na Ecuador.
Onye ọ bụla achọpụtala na ọ nwere COVID-19 ma mgbe otu ọnwa ga-aga n'ihu na-enweta nsonaazụ dị mma na ule RT-PCR, ga-eweta akwụkwọ ahụike enyere na obodo nke gosipụtara na ọ nọghị na ọrịa ahụ. Usoro maka ịbanye Ecuador, ọ bụrụhaala na ọ nweghị mgbaàmà ọ bụla.
Maka ndị njem nlegharị anya nke mba: a ga-emerịrị ule niile maka ịchọpụta COVID-19 n'ime
ụlọ nyocha enyere ikike dị ka ndị nrụpụta RT-PCR, ihe nlele na nnwale COVID-19 ngwa ngwa site na Agency for Quality Assurance of Health Services and Prepaid Medicine – ACESS.
Maka ndị njem nlegharị anya si mba ofesi: Ekwesịrị ịme nnwale maka COVID-19 n'ụlọ nyocha enwetara ikike na obodo ọ bụla.